Miamboho, mahefa loza; atrehina, miseho mahavita… | NewsMada
Miamboho, mahefa loza; atrehina, miseho mahavita…
Par Taratra sur 26/11/2016
Mahavita, hono, izao fitondrana izao, tsy misy toa azy, mahatanteraka fanamby… Odian’ny sasany tsy hita, hono, izany, fa fandresen-dahatra ny asa vita. Aleo hitsara ny vahoaka ifotony: misitraka fihatsaram-piainana toy inona, ohatra?
Odian’ny mpitondra sy ny mpiara-misalobon-komana tsy hita koa ve fa miara-dalana amin’izany ary manoatra lavitra noho izay kely hoe vita aza ny raharaha maizina sy maloto ambadika? Tsy mety mampifankahazo resaka izay…
Rehaka etsy sy eroa ny hoe tsy mbola nisy toy izao fitondrana izao amin’ny fanapahana-kevitra sy ny atao. Fa tsy mbola misy mahavita ny vitany koa amin’ny tsy fanarahan-dalàna, ohatra: fanendrena praiminisitra, parlemantera mahazo mivadika antoko…
Manginy fotsiny ny kolikoly teny anivon’ny Antenimierampirenena, tsy amelan’ny birao maharitra ny Bianco hanao fanadihadiana ifotony. Teo koa ny hosoka sy hala-bato tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana loholona.
Tsy hadino ireo raharaha maloto sy maizina: fakana an-keriny tany Toamasina, andramena tratra tany Singapour, ny fipoahana baomba teny Mahamasina ny 26 jona, ny rongony tamin’ny gony tratra tany Toliara…
Eo koa ny “Raharaha Anjorozobe“, ny “Raharaha Ambohimahamasina“, ny “Raharaha Soamahamaniana“… Santionany ireo amin’izay fantatra. Odian-tsy hita sy tsy tsaroana? Na avela ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao…
Tsy hoe fandrorana tsy maimbo, sanatria. Fa ireo ny fandoto iray tandroka mahaleo ny fandio iray siny, na inona afitsoky ny mpitondra. Nefa be lavitra noho ny raharaha maizina ambadika ny tsara imaso lazaina ho asa vita.
Tsy inona ary mamarina an-kady izay hoe fampandrosoana, raha gaboraraka ny harem-pirenena, amidy ny tanindrazana; manjaka ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano, ny kolikoly, ny tsy fangaraharana, ny jadona…
Tsy azo odian-tsy hita avokoa izany, na toy inona fanamarinan-tena, fandokafan-tena. Sao haingo ambony tsikoko na rehaka ambony rehoka, sanatria? Na miamboho, mahefa loza; atrehina, miseho mahavita?